Banyere Anyị - Zhejiang Tonva plastik machine CO., LTD
Zhejiang Tonva plastik machine CO., LTD
TONVA (AZ turnkey soplaya, 1993), nke ISO9001 duziri: 2008 International Quality Control System na CE & SGS asambodo, anọwo na-aga n'okporo ụzọ na-emepe emepe ọhụrụ elu-ọgwụgwụ ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ. Anyị azụmahịa eme ekpuchi imewe nke ịfụ Nkedo Machine, Pet ịfụ Nkedo Machine na Ebu. Anyị na-enwe ike mbupụ fọrọ nke nta 400 tent nke igwe kwa afọ na ihe karịrị 100 mba, dị ka Bangladesh, India, Pakistan, South Africa, Argentina, Malaysia, UAE, USA na na.
Anyị extrusion igbu ịkpụzi igwe na n'ọtụtụ ebe etinyere kwa ụbọchị-eji ngwaahịa, egwuregwu mmiri kalama, pesticide karama, na nkà mmụta ọgwụ karama, ịchọ mma karama, nri mbukota akpa, ngwá ụlọ akụkụ, na akpaaka akụkụ, toy, Jerry nwere ike na ndị ọzọ obere ma ọ bụ ọkara-sized oghere plastic ngwaahịa.
Backnọgide na-ndabere bụ elu anyị kacha mma ọrụ ngwá ọrụ. Na usoro ọ bụla nke oru ngo gị, anyị nọ ebe a iji nye ndụmọdụ ndụmọdụ teknụzụ. Gị afọ ojuju na ịzụta ahụmahụ bụ nnukwu nkwenye anyị. Anyị na-agba mbọ iji na-emezu gị mmepụta arụmọrụ na ike na ihe mgbaru ọsọ nke mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ.
Ihe karịrị afọ 30 nke ahụmahụ mmepụta ọkachamara, nye gị igwe na akụrụngwa dị elu.
Hazie igwe na-enweghị ọkọlọtọ dịka mkpa ndị ahịa na imepụta akụrụngwa asọmpi maka gị.
Ghọta ụlọ ọrụ Industry 4.0 ma kwalite “mmekọrịta mmadụ na kọmputa”
Mgbe-sales ọrụ otu mgbe niile online iji nye gị àgwà ọrụ.
Nye nkwado mgbe ire ere maka nrụpụta igwe gị yana mepee gị.
Na-elekwasị anya n'àgwà nke igwe karịa 30years, wetara gị ọrụ ogologo nke igwe. Na-aga n'ihu na-agbanwe ma na-emepe emepe, na-enye ngwa ọrụ ka mma karị, na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa maka ahịa.
The isi technology nke igwe Die isi na-akpụ akpụ na mmechi nke onwe ha imewe bụ anyị pụrụ iche uru na igbu ịkpụzi ụlọ ọrụ.
Innovation bụ ihe na-arụpụta ọrụ na isi iyi nke ike ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka a kpakpando ụlọ ọrụ pụrụ iche na imewe nke igbu ịkpụzi igwe,> 7 \_ OW \_ mgbe niile na-etinye technology nnyocha na mmepe na akpa ebe. The ụlọ ọrụ nwere otu nọọrọ onwe ha nnyocha na mmepe ụlọ, na-onwem na a ọkachamara R & D otu, gụnyere elu igbu ịkpụzi injinia, elu igbu ebu imewe injinia, igbu ịkpụzi technicians, wdg Na nzaghachi dị iche iche mkpa nke ahịa, anyị mgbe niile na-agbalị otutu ngwọta, prividing igbu ịkpụzi igwe ahịa na elu ọgwụgwụ, ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na elu na-agba akụrụngwa.
Innovation na - eduga YAOVA ka ọ gaa n’ihu.
Ndị ụlọ ọrụ na - agbaso "ịdị mma nke lanarị, ihe ọhụrụ na mmepe, gbasoro ahịa, dabere na ọrụ" nkà ihe ọmụma azụmaahịa, ndị ọrụ mbụ zuru ezu, ndị dịgasị iche iche, ndị nwere ọkwa dị iche iche, dị njikere ịkwado ndị ọrụ ibe ha sitere na ụdị ndụ niile iji mepụta